Nin Iswiidhan daganaa oo ka qeyb ka ahaa falalkii argagixiso ee Paris iyo Bryssel - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Mohamed Belkaid waxuu ku lug lahaa weeraradii argagaxiso ee magaalada Paris 2015. sawir: SVT/Peter Dejong/AP Photo.
Nin Iswiidhan daganaa oo ka qeyb ka ahaa falalkii argagixiso ee Paris iyo Bryssel
Nin Iswiidhan daganaa oo qeyb ka ahaa falalkii argagixiso ee Paris iyo Bryssel
La daabacay onsdag 30 november 2016 kl 10.00
Maxamad Belkaid oo daganaa magaalada Märsta ayaa qeyb ka ahaa diyaarinta iyo fulinta weeraradii argagixisanimo ee loo geystey magaalooyinka Paris iyo Bryssel.
Barnaamijka Uppdrag granskning ee ka baxa talefishinka SVT ayaa kashifey xiriirka ninkaasi la lahaa muslimiin mintid ah oo ka hawlgala gudaha dalkaan Iswiidhan.Ciidamada sirdoonka dalkaan Iswiidhan ee Säpo ayaa muddo 15 sano ah waxay isku dayayeen in ay joojiyaan mid ka mid ah kooxahaas mintidka ah.
Barnaamijka Uppdrag granskning ayaa iyagoo iskaaashi la sameynaya talefishin dalka Jarmalka laga leeyahay oo lagu magacaabo ARD, waxay gacanta ku dhigeen sir laga heley sirdoonka ururka Daacish taas oo muujineysa ilaa 4 000 oo magac oo xubno ka ah ururkaas argagixisada ah.Magacyadaas la kashifey ayaa waxaa ka mid ah kumanyaal qof oo u dhalatey dalal qaaradda yurub ka tirsan kuwaas oo aadey dalka Suuriya iyo ururka Daacish.Dadkaas magacyadooda la kashifey ayaa waxaa ka mid ah 12 qof oo u dhalatey dalkaan Iswiidhan.
Baaritaanka uu barnaamijka Uppdarag granskning sameeyey ayaa waxaa lagu ogaadey in qaar badan oo ka mid dadkaas Iswiidhishka ee magacyadooda la kashifey ay ahaayeen kuwa xiriir dhow ka dhexeeyo.Tusaale ahaan qaar kuwaas ka mid ahi waxay adreeska ugu wada qornaayeen hal guri, waxaa isla goobtaas daganaa nin lagu magacaabo Abu Cumar oo lagu yaqaaney in uu kooxaha argagixisada ah xiriir la leeyahay.
Qof ka hawlgala sirdoonka ciidamada xoogga dalka Iswiidhan isla markaana si dhow ugu dhuundaloola xogta ay hayaan ciidamada sirdoonka dalkaan Iswiidhan ee Säpo, ayaa wuxuu yiri sidan soo socota:
Ninkaan Abu Cumar la yiraahdo isla markaasna loogu yeero ”Rinjiilihii” ,wuxuu ku hawlanaa lacago dirid iyo in uu xiriirin u sameeyo dadkaas mintidka ah, waana nin xiriir dhow la leh argagixisada caalamiga ah.
Ciidamada sirdoonka ee Säpo ayaa muddo 15 sano ah waxay isku dayayeen in ay joojiyaan falalka uu Abu Cumar faraha kula jirey, tuhunkaas oo jira ayaan hadana ninkaas waligiis lagu soo oogin wax danbi ah oo argagixisada la xiriira sidaas oo ay tahayna ururo badan oo sirdoon ah ayaa qaba in ninkaasi uu kooxaha xagjirka ah u qoro qaar ka mid ah dadka ay falalkooda u adeegsadaan.
Mid ka mid ah magacyadaas la kashifey oo ka mid ah kooxda Daacish ayaa ah Maxamad Belkaid oo ku noolaa magaalada Märsta, isla markaasna qeyb ka ahaa falalkii argagixisanimo oo ka dhacey magaalooyinka Paris iyo Bryssel kuwaas oo galaaftey nolosha dad wadar ahaan gaaraya ilaa 162 qof.
Barnaamijka Uppdrag granskning ayaa kashifey xog cusub oo la xiriirta xiriirka dhow oo ka dhexeeyey Belkaid iyo Abu Cumar, wuxuuna Belkaid baraaktiko ahaan ugu shaqeyn jirey laba dukaan oo Abu Cumar ku leeyahay bartamaha magaalada Stockholm.
Dukaamadaan ayaa ahaa goobo kulmiya dadka aaminsan afkaaraha xagjirka ah.
Ciidamada sirdoonka dalkaan Iswiidhan ayaa ka gaabsadey in ay ka hadlaan qaabkii ay dabagalka ugu sameyn jireen Maxamad Belkaid ka hor intii uusan ku biirin kooxda argagixisada ah ee Daacish iyo waliba Abu Cumar oo Daacish u soo qora dadka ku biiraya.
Maxamad Belkaid iyo qaar kale oo ka tirsan ururka daacish ayaa waxay ku dhuumaaleysanayeen guri ku yaala magaalada Bryssel ka dib markii uu dhacey falkii argagixiso ee lagu qaadey magaalada Paris sanadkii 2015-kii, halkaasna waxay ku qorsheeyeen weeraro cusub oo lagu qaado gaoonka diyaaradaha iyo xarunta tareenada dhulka hoostiisa mara ee magaalada Bryssel.
15-kii maarso ee sanadkaan ayaa hawlgal ciidamada booliiska Beljimku sameeyeen waxay ku dileen Maxamad Belkaid, balse hal usbuuc ka dib kooxdiisu waxay fal argagixisanimo ka fuliyeen magaalada Bryssel.
Abu Cumar ayaan ilaa hadda la ogeyn halka uu ku sugan yahay, waxaana dhowr sano ka hor albaabada loo laabey dukaamadii uu ninkaasi magaalada Stockholm ku lahaa, sidoo kalana waxaa magaciisa laga saarey xarunta dadka dalkaan Iswiidhan dagan magacyadooda lagu keydiyo laakiin wararka qaar ayaa sheegaya in Abu Cumar uu wali ku sugan yahay gudaha dalkaan Iswiidhan, walina ku hawlan yahay sidii uu dhalinyaro u dagaalanta ururka Daacish dalkaan Iswiidhan gudihiisa uga qori lahaa.
Anders Kasman oo ah madaxwaaxeed ka hawlgala ciidamada sirdoonka dalkaan Iswiidhan ayaa wuxuu yiri sidan soo socota:
Waan fahansanahay in ay jiraan dad badan oo ay ka careysiineyso in qof waxaas oo dhan ku lug lihi uu wali hawshiisii sii wato laakiin sidaas oo ay tahay waxaan caddeynayaa in aan awoodayada oo dhan isugu geyn doono sidii aan arrinkaas u soo afjari laheyn, ayuu yiri Anders Kasman oo ah madaxwaaxeed ka hawlgala ciidamada sirdoonka dalkaan Iswiidhan.